Gubashada Gubashada - Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Bogga ugu weyn/updates/Gubasho Dab
PG&E waxay ku fashilantay dadka reer California. Shirkadda ayaa ahayd siinta balaayiin doollar maalgashadayaasha iyada oo loo siinayo saami qaybsiga iyo lacagaha la siinayo siyaasiyiinta halkii ay ka qaban lahaayeen dayactirka lagama maarmaanka u ah kaabayaasha halista dabka ee gabowga.. Malaayiin dad ah ayaa dhawaanahan lagala tagay awood la'aan, iyo boqolaal kun oo dad ah ayaa ku barakacay dayacaad la’aantaan.
Waxaa soo kordhaya wicitaano la xiriira ka qaado PG&E maal-gashadayaasha gaarka loo leeyahay, oo ku dhiirrigeliya faa'iido, oo ka dhig meel fagaare ah.
Si la mid ah sanadihii la soo dhaafay, wax kale ayaa soo ifbaxay, ka hor inta aan dambasku iyo qiiqu kala bixin - bulshooyinka cadaaladda salka ku haya, isu imanaya si ay u daboolaan baahiyaha kuwa inta badan saameynta ku leh anshaxa kaalmaynta labada dhinac.
Qaarna, sida shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo shaqaalaha guryaha, ka bixitaanku ma ahayn ikhtiyaar. In 2017, Mashruuca Qabanqaabada Waqooyiga Bay iyo xulafooyin la sameeyay UndocuFund waxayna u qaybiyeen ku dhawaad ​​$ 6.5 milyan oo ku dhawaad ​​qoysaska 2,000 ah ee ku waayey guryahooda, hantidoodii iyo dakhliyadii ku jiray dabka. Haatan, waxay mar kale raadinayaan tabarucaad si ay ugu qabtaan shaqo la mid ah qoysaska aan sharciyeysnayn ee ay saameeyeen dabka Kincade. Tabaruc halkan hadaad awoodid
Iyaguna maahan kuwa keliya ee ka jawaabaya niyad ahaan kaalmo isweydaarsi isla markaana dhiirrigelisa soo kabsashada caadiga ah. Saaxiibada DSA iyo dhalinyarada ka socota Dhaqdhaqaaqa Sunrise, ayaa abaabulaya ficilo iyo jawaabo wadaagga ah. Eeg oo ku dar faahfaahintaada foom si aad ubixiso ama aad u hesho kaalmo halkan, ama Isbaanish, halkan. Iyo caawin Waqooyiga Bay DSA isku dar gargaar masiibo iyo cadaadiska dadweynaha ee PG & E adoo ku deeqaya halkan.
Sidoo kale dabka Kincade, waxaa jira khadka tooska ah ee sharciga ah. U wac 707-542-1290 ama 888-382-3406 si aad uga caawiso sheegashada caymiska, luminta hantida, arrimaha milkiilaha kireysteyaasha iyo wixii intaa ka badan. Khad toos ah oo sharci ah oo la mid ah ayaa loo hayaa Dabka Magaalada Los Angeles iyo Saddleridge Fire: 800-870-0732.
805 UndocuFund sidoo kale waxay dib ula xidhiidhay si loogu adeego dadka aan sharciga lahayn ee ay saameeyeen dabka fudud iyo dabka Maria ee Ventura County. Tabaruc halkan.
Xiritaanka awoodeed waxay masiibo ku aheyd iyo naftooda. Iyo uruur yar oo qareen u dooda xuquuqda naafada, Naadiga Dhaqanka Naafada Cadaaladda Naafada, waxay u kacday munaasabadda si loogu haqab tiro baahiyaha dadka naafada ah ee ku dhex nool bulshadooda. Si xoogaa xoogaa lacag ah loogu diro, riix halkan.
Tirada qoysaska ay saameeyeen dababkii ugu dambeeyay wali lama garanayo, halista dabka masiibooyinka badan ayaa wali jira waxaana la filayaa in la xiro korontada PG & E in la sii wado sannadaha soo socda. Waxaa jira caddayn in kastoo, sida Naomi Klein waxay ku xusan tahay maqaal dhowaan lagu qoray 'The Intercept', in isbedelka siyaasad ku wajahan dib u soo kabashada ay macquul tahay lagana yaabo inay ku dhacdo marxaladihiisa bilowga.
Markii qiiqa uu baneeyo, oo beeluhu markale dib uga soo baxaan burburka, waxaan ognahay inay jirto wado dheer oo soo socota. Waan ku mahadsan nahay inaynaan kali ku ahayn inaan socodsiinno. Si aad wax badan uga ogaato Naadiga Dhaqanka Naafada Cilmiga Naafada, Undocufund, 805 Undocufund, The Sunrise Movement, DSA, iyo ururada kale ee iskaashatada ah ee dhaqdhaqaaqyada dhaqdhaqaaqan si ay u soo kabsadaan oo keliya, fiiri qaybta iskaashatada ee websaydhkeena gujinaya halkan.